Maitiro ekuisa Dream Studio kubva kuUbuntu | Kubva kuLinux
Maitiro ekuisa Dream Studio kubva kuUbuntu
Panguva ino, ini ndanga ndatotaura akati wandei eiyo Dzazvino distros dzekugadzira multimedia uye maitiro ekugadzirisa hwaro hweiyo ichangobva kuiswa Ubuntu nechinangwa chimwe chete ichi.
Pandataura nezvazvo Zviroto Studio (izvozvi "Chiroto Studio Kubatana") Ndasuwa kutaura kuti distro inopa rutsigiro uye, kunze kwaizvozvo, Dick MacInnis arikugadzirira akateedzana emavhidhiyo tutorials kushanda nayo. Sezvo isu tichigona kurodha pasi uye nekuisa iyo iso, pawebhu ivo vanotipa iyo inogoneka yekumisikidza yakajairwa Ubuntu kuisirwa uye nekuisa akasiyana mapoka eesoftware akaisirwa muRotoStudio patinosarudza.
Chinhu chekutanga chekuita kutarisa kuti sisitimu yacho yazvino mu 'Zvirongwa> Software Gadziriso'.
Kana tangovandudzwa, tinodhawunirodha uye unzip iyo yekumisikidza dhairekitori, iyo iine README ine mirairo pamwe neyakaisirwa script. Nekudzvanya-kaviri pane iyo inosimudza uye kusarudza 'mhanya', ichaenderera ichirodha pasi zvese zvinodiwa zviwanikwa. Chinhu chekutanga icho mugadziri achaita kugadzirisa zvinyorwa, kuwedzera izvo kubva kuRoto Studio distro. Kana izvi zvangoitwa, zvichatiratidza runyorwa rwekusarudza aunoda software zvikamu. Izvi ndeizvi:
Ziva kuti izvi zvinosanganisira huwandu hwakawanda hwe software, saka zvinogona kutora nguva yakareba kurodha pasi nekuisa ese mapoka. Mushure mekuiswa kwesoftware, menyu nyowani ichatipa sarudzo yekuwedzera enharaunda nharaunda LXDE (AvLinux, Lubuntu) kana XFCE (Ubuntu Studio, Xubuntu). Chekupedzisira, hwindo rinotibvunza kana isu tichida iyo yakasarudzika mushandisi kumisikidza yeRoto Studio. Iwe unogona kuti kwete, asi mukugadzirwa kwemultimedia kune akati wandei paramende (akatsanangura pano) iyo yatinozoponesa nedanho iri.
Sezvauri kuona, kuchinjisa kuisirwa Ubuntu kuhurongwa hwakazara nemapurogiramu ekugadzira multimedia anga ari nyore kwazvo. Iko hakuna kurasikirwa mune yekutaura uko mushandisi akataura kuti ichi ndicho chikonzero nei Linux isingakure 4%: iwe unofanirwa kurodha pasi faira, kurisunungura ... Mhinduro yaDick MacInnis yakanakisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Maitiro ekuisa Dream Studio kubva kuUbuntu
U_U haina kushanda Uye ini handidi zvekuonekwa uye nekubatana kwacho hakugadzirisike
Pindura kune pako
Handizive kana iyi link ichizokubatsira. Kana ikasazvigadzirisa iwe, zvinoonekwa kuti Dick anopindura nguva zhinji, saka usazeze kumubvunza 😉
GASP !!!! xD Edza uyu murairo 😉
Ndine mubvunzo ... Ndinoibvisa sei?
Ini ndakaiisa uye ini handifarire zvayakaita kuUnited interface (dzimwe nguva zvinoita senge win7)
Matias Colli akadaro
Pindura Matias Colli
THX! Kana iwe ukawana inoenderana vhidhiyo pane iyo tsananguro mune zvishoma kana zvimwe zvakadzama zvingave zvinobatsira, usazeze kutizivisa! 😉
Unoziva here kana iine yakaderera latency kernel senge Ubuntu Studio?
Ese multimedia distros ayo andakaedza kufambidzana nawo ane yakaderera latency kernel, kunyangwe kubvira vhezheni 3.2 zvisingawanzo zvakanyanya kudikanwa. Saizvozvo, iwe unogona kuiisa kubva kuzvitoro pane yakajairwa Linux system, hachisi chinetso chikuru.
Ubuntu-based distros kazhinji haina dambudziko nechero mutauro.
Nezve maVSTs. Ini handina kutamba zvakanyanya navo asi pamwe iyo distro inonyatso kuvashandisa ivo AvLinux (yakavakirwa paDebian). Parizvino Ardor pachayo haitsigire maVST, zvinodaro kuburikidza nechirongwa chinonzi Ardor-VST (chakabatanidzwawo muAvLinux) uye kubva kwavakaparadzanisa makore mashoma apfuura. Inogona kushandiswa, uye Glen anobva kuAvLinux akaburitsawo Ardor3-VST package. Kana iwe uchida kushandisa VSTs, ini ndaikurudzira AvLinux: kunyangwe ini ndaida DreamStudio zvakanyanya, ndinoiona seisina kugadzikana kupfuura AVLinux, uye kana iwe uchida kushandisa VSTs iwe uchazoda iyo yakasimba kwazvo system iwe yaunogona kuwana, kuti uzviponese matambudziko 😉
Ndiyo distro muchiSpanish?
Inonakidza. Ndakaona kuti inosanganisirwa Arodur ine vst rutsigiro. Kune rimwe divi ndaive ndichitsvaga painternet asi ini handina chandakawana nezvazvo: unoziva here kana iine yakaderera latency kernel senge Ubuntu Studio?
Computer Forensic Nyanzvi
Zvekare ndinofanira kusimbisa kuti chinyorwa chakandibatsira kwazvo.
Mhoroi ndiri kutsvaga hopestudio kubatana 12.04.3 iso mufananidzo, kana paine ane mufananidzo wakadai ndapota uutumire;)
Pindura kuti urarame
Primary Master DNS yeLAN pane Debian 6.0 (V) uye yekupedzisira